Otu esi eme ka mmiri drainage na dacha, ụzọ dị irè - Mmiri mmiri - 2019
Ịgbagharị nke saịtị ahụ na aka ya, otu esi agbapu ụlọ ahụ site na mmiri
Ogologo oge okpomọkụ nke oge a na-eche ọtụtụ nsogbu ihu na atụmatụ ya. Njide ọgwụ, nri fatịlaịza, na-elekọta ha na ịgbara - a symbiosis nke na-anọchi anya foto nke oge okpomọkụ. Otú ọ dị, nsogbu kachasị njọ ma na-emebi ihe bụ nsị nke oke saịtị. Nsogbu a yiri ihe na-abaghị uru na-ebu ụzọ kpebie ịdị adị nke nsogbu na ọnụ ọgụgụ zuru ezu nke ibé ahụ. N'ụzọ dị mma, ọ bụghị nanị ndị na-elekọta ubi ka nsogbu a dị, ihe anyị ga-akọwa ga-akọwacha ụzọ kachasị mma maka ihichapu ebe ahụ site na mmiri.
Kedu ihe bụ usoro mpempe mmiri, ụdị nke akụkụ na atụmatụ ha
Esi aka gị mee ka mmiri dị ala
Esi eji mmiri mmiri gbapuo ụlọ
Mee ka ịkwọ ụgbọala, ụzọ kachasị mfe
Ntugharị nke saịtị ahụ, ihe ị ga-eme
Mmiri dị ukwuu na ala ubi nwere ike ịmepụta ọtụtụ nsogbu, nke bụ isi n'ime ha bụ njedebe nke mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri na mmalite nke ntụgharị ha. Iji chekwaa ụlọ nke okpomọkụ gị site na nsogbu ndị a na-apụghị izere ezere, n'ezie, ọ dị mkpa iji ngwa ngwa mee ihe, na-eme nhọrọ maka ihu ma ọ bụ ụzọ ọzọ nke mmiri drainage.
Enyemaka nke otu ndị ruru eru. Dị ka nsogbu ọ bụla ọzọ, oke mmiri nke ebe ahụ nwere ike ịbụ ndị ọkachamara ọkachamara kpebiri inwe ngwaọrụ pụrụ iche. Ha maara otú ha ga esi esi dichaa dacha, ma, dịka iwu, ndị ọkachamara na-awụpụ mmiri na nfuli - mmetụta ahụ dị ntakịrị, ma ọ bụghị nke na-adịgide adịgide.
Ngwa aja na ala. Usoro a na-ejikọta ájá ájá, nke ahụ bụ ya edo na-ejikọta na ájá na hà hà. Usoro a ọ bụghị nanị na edozi nsogbu ahụ, kama ọ na-eme ka mma ala ahụ dịkwuo mma, na-amụba mkpụrụ ya. Nsogbu nke usoro bụ mkpa maka nnukwu ájá na ịrụ ọrụ siri ike.
Ịmepụta drainage. Ntinye nke usoro drainage bụ emepụta ụda pụrụ iche n'ozuzu saịtị ahụ, ntinye aka ha na mmiri ikuku ikpeazụ. Usoro a dị oke arụmọrụ, ọnụ ọnụ na ọnụ ahịa. Ọzọkwa, ka ọ dị ugbu a, ahụmahụ nke ndị bi n'oge okpomọkụ, nke gụnyere ụzọ isi mee ka mmiri drainage, nwere ike ịgụ akwụkwọ na aka gị. N'ihi ihe dịgasị iche iche na ihe ndị ọzọ, ndị ọkachamara na-atụ aro ịhọrọ ụzọ a isi edozi nsogbu ahụ na mmiri mmiri.
Open ditches. A na-edozi usoro iwepụ mmiri oke mmiri site na saịtị ahụ na-emepụta (egwu ala) oghere na-emeghe n'akụkụ obere. Ya mere, mmiri nke na-ahụ n'elu saịtị ahụ na-abanye n'igwe ụgbọ mmiri ahụ ma na-atụba ya n'olulu mmiri ma ọ bụ n'èzí n'ókèala ahụ. Ntughachi dị ịrịba ama nke mmiri iyi ndị dị otú a bụ mmịfu na mmetọ ha ngwa ngwa - arụmọrụ na-ahụ naanị n'izu mbụ.
Osisi osisi. Dịka ọmụmaatụ, osisi ndịwawara, dị ka willow na birch, dịka ọmụmaatụ, nyere aka mee ka ala dị ọcha dị ọcha. Osisi, n'ihi mmiri nke aka ya, kpoo ebe ahu. Otú ọ dị, ihichapu saịtị ahụ site n'enyemaka nke osisi bụ usoro ogologo oge nke na-enweghị ike ịnagide onye bi n'oge okpomọkụ. Ọzọkwa, osisi na-emepụta onyinyo ọzọ na dacha, bụ nke na-adịghị mma na ọnọdụ ọnụ ọgụgụ obere ụlọ.
Ala buru ibu ma na-ebuli akwa nke akwa. Ihe ngwọta maka nsogbu dị na nke a bụ naanị na ịzụta ala ma mee ka elu ala dum dị na dacha. Nhọrọ a bụ ihe dị irè, ma ọ dị oke ọnụ ma na-ewe oge, nke na ọnọdụ dị adị adịghị ekwe ka ọ tụlee ya dịka isi.
Ụlọ obibi ụgbọ mmiri - otu n'ime akụkụ kachasị mkpa nke nkwukọrịta sayensi na saịtị ahụ. Ọ na-enyere ala mmiri, mmiri mmiri ozuzo ma gbazee mmiri ka ọ ghara ịnọ na saịtị ma, ya mere, na-egbochi mmiri mmiri. N'ezie, e nwere ọtụtụ ụzọ isi kpochapụ ebe ahụ site na mmiri, mana ụdị mmiri ndị a na-esote egosila na ha kachasị mma:
Mmiri drainage (ụdị oghe);
Mmiri miri emi (ụdị emechi).
Ha nwere ọtụtụ atụmatụ na atụmatụ arụmọrụ, ya mere, tupu ha eji nke a ma ọ bụ ụdị drainage ahụ n'ụlọ ha, ha ga-enyocha nke ọma.
Mmiri drainage na dacha na-anọchite anya ya otu netwọk nke emepe emepe, ebe a na-emegharị ma na-anata ebe a na-eme n'akụkụ ụfọdụ, nke na-egbochi nkwụsị ala. Usoro nchedo a maka oke mmiri mmiri na ókèala nke okpukpu okpukpu bụ nke zuru oke maka iwepụ mmiri si egwu, drains, roofs na canopies. Banyere mmiri mmiri, mmiri mmiri dị na dacha dị irè naanị ma ọ bụrụ na nnukwu mmiri na oke dị elu, ebe mmiri na-anakọta n'elu ala.
Na-arụ ọrụ n'akụkụ A na - ahụkarị arụmọrụ kachasị elu nke drainage mmiri site na oghere okporo mmiri nke ọ dịkarịa ala 30-40 cm na mgbatị nke akụkụ mgbidi nke ọ dịkarịa ala ogo 30, nke na - eme ka nchịkọta mmiri dị na saịtị ahụ. Mmiri drainage dị ebe ahụ na linear. A na-ebute ihe mbụ maka nchịkọta mmiri na ebe ntanetịpụtara. A na-ejikọta drainage mmiri dị n'akụkụ mmiri drainage drainage, ya bụ, drainage linear. Mmiri mmiri nke ebe ndị dịpụrụ adịpụ, dị ka usoro, bụ ụdị nnụnnụ mmiri, na-enyere aka na-ewepụ mmiri ọzọ n'ógbè ahụ.
Ngwaọrụ dị otú ahụ dị mfe, na njirimara ha bụ naanị site na oke akụkụ na nhazi nke nchịkọta na iwepụ mmiri. A na - eji mmiri mmiri na eriri na - egosiputa ihe dị iche iche nke mmiri drainage nke dị na mpaghara ebe ọ bụ nnukwu mmiri mmiri na mmiri ndị ọzọ. N'ikwu eziokwu, a na-ejikọta ọnụ mmiri dị larịị na ebe elu.
Ọ dị mkpa!A na-eme ka irighiri mmiri dị elu na-arụ ọrụ site na nhazi nke usoro dị otú ahụ na nhazi ya mgbe niile, dịka mmiri ahụ na-eme ngwa ngwa na-eme ka ọ ghara ịchọta.
Dabere n'aha ahụ, ọ ga-edo anya na Akụkụ dị iche iche nke drainage miri emi bụ ebe dị n'okpuru ala. Ebumnuche dị otú ahụ, yana mmiri drainage mmiri, bu n'uche iji zoo mmiri mmiri na mmiri ozuzo si dacha. Ụdị drainage ahụ dịka iwu ahọrọ na dabere na ọnọdụ ebe obibi nke nsogbu ahụ. Ya mere, mmiri mmiri mechiri emechi nke kachasị mma bụ nke kachasị mma na ala dị larịị ma na-enwe ebe dị elu nke mmiri.
Maka atụmatụ atụmatụ, ọ bụ ihe amamihe dị na ya ịkekọrịta mmiri miri emi n'ime:
Mmiri mmiri dị nro na-adịkarịkarị ma yie ka ọ bụ ebe a na-emechi emechi, pipụ na trays ndị dị n'okpuru ala. Ụdị ntụgharị nke usoro mmiri drainage bụ olili, nke nwere nfuli pụrụ iche. N'ihi nchịkọta dị mgbagwoju anya na iji ngwá ọrụ eletriki eme ihe, imewe na mmejuputa iwu mmiri dị otú a siri ike, oge na-efu ma dị oke ọnụ. Ọ bụ n'ihi nke a ka ejiribeghị mmiri drainage.
Njikọ ejikọta - nchikota nke ntaneti na ntaneti. Iji nchikota abughi kwa ihe kwesiri ime. Dị ka ọwa kachasị, a na-eji pipụ nwere oghere ndị e mere na ha iji banye mmiri. Ihe dị omimi dị otú ahụ dị ihe dị ka 40-50 cm.
Ị ma?Mmiri dị omimi bụ naanị usoro iji chịkwaa ala mmiri na ala mmiri, nke nwere ike ịkọ ma kụọ ala ubi dum.
Enwere ike iji aka nke aka gị na-ekpo mmiri nke okpokoro okpukpo nke ọma, ebe ị na-ahụ na arụmọrụ dị elu nke ọrụ ndị a rụrụ. Ozugbo ọ dị mkpa ịkọ nke ahụ Usoro a kachasị mma ma dị mfe. Dị ka e kwuru na mbụ, nchịkọta mmiri na-agụnye ngwakọta nke usoro nke drainage. Ya mere, na usoro nke ịmepụta mmiri na-emeghe nke dacha, ọ dị mkpa iji wụnye mmiri mmiri, mmiri drainage, ihe nchekwa na igwu mmiri.
Uzo mmiri a na-emeghe nke kachasị elu bụ usoro usoro nke na-enye ọkwa zuru oke nchedo. Nhazi a dị mfe ma ọ dịghị achọ nkà pụrụ iche. Ndabere nke mmejuputa usoro a bu nkesa kwesiri ekwesiri ime atụmatụ maka ebe azu - ya kwesiri igosi ulo nile, osisi, ma, n'ezie, ebe ebe ana achikota mmiri ozuzo na mmiri ala. Na nke a, ọ dị mkpa ka ị hụ ụzọ nke ịgbanarị mmiri n'ime oghere mmiri ma ọ bụ karịa ókèala nke saịtị ahụ.
Ị ma?Ọtụtụ mgbe, ndị na-elekọta ugbo nwere ahụmahụ, na-edozi nsogbu nke mmiri mmiri na-asọba n'ala na ala enyemaka nke drain holes, mepụtara onwe ha nnukwu mmiri buru ibu, mechara mee maka mmiri ogbugba mmiri. A na-eme nke a site na ịkọ olulu ma wụnye mgbapụta n'ime ya.
Ime atụmatụ yiri nke ahụ, cheta: A ghaghị ịhapụ mmiri na ntụgharị nke mkpọda ahụ. Ke adianade do, iji mee ka ala ebe a na-eji eme ihe, ọ ga-eme ka ụzọ mmiri dị iche iche na-agagharị n'okporo ụzọ kacha nta.
Mgbe ị gụsịrị atụmatụ, ịkwesiri igwu olulu na omimi na obosara nke 30 cm (olu mmiri ahụ ekpebiri n'onwe ya, dabere na olu nke mmiri mmiri na mmiri ozuzo). A ghaghị ime nke ọma n'akụkụ akụkụ nke ọdọ mmiri ahụ nke ọma ka ọ bụrụ na n'ọdịnihu, a gaghị enwe nkwụsị. A na-ejikọta trenches niile e gosipụtara na atụmatụ ahụ, dị ka iwu, na otu ma mee ka ọ banye n'olulu, ma, ọ bụrụ na enwere ike ịṅụ mmiri n'èzí n'ókèala nke saịtị ahụ, mgbe ahụ, ha nwere ike ịme onwe ha.
A ga-eji eriri ma ọ bụ tarpaulin jikọta ọnụ mmiri ma ọ bụ usoro nke canal na-emecha, nke ga-ekwe ka ị ghara ịla oge, kama iji mee ka mmiri gbaa ọsọ ọsọ. Iji chegharịa ihe oyiyi nke okporo mmiri ahụ, ọ ga-adị mkpa ka eserese ya na mbọ, gbanye n'ime ala, ma ọ bụ ndị ọzọ na-edozi ihe. Ihe nkiri ahụ dị n'akụkụ mgbidi ya, nke a na-agbada site n'elu, na-ejikọta ya na osisi ma ọ bụ ígwè, nke a na-etinye na obosara ọ bụla 30-50 cm.
Ọ dị mkpa! Iji hụ na ihe ntanetị nke ihe nkiri ahụ na-adabere na mmiri ọ bụla n'ọnọdụ ọ bụla, ebe nkwụsị kwesịrị ịdị mkpirikpi. A ghaghị icheta ya ma ghọta na ịdị ọcha na nzi ezi n'oge a na-ekpebi oge ogologo na ịdị irè nke nsonazụ ikpeazụ.
Kwesiri iche - N'ọnọdụ ụfọdụ, a na-agbanye mgbidi na isi nke okporo mmiri, nke na-ewepụ ọtụtụ nsogbu na nsogbu, ozugbo Usoro nke usoro a dị oke ọnụ, na-arụsi ọrụ ike ma na-achọ ụfọdụ nkà. Ọzọkwa, drainage nke mpaghara dịpụrụ adịpụ, nke usoro ma ọ bụ ọwa ahụ na-anọchite anya ya, aghaghị ịbụ ọkara ejupụta na ibe osisi, ihe mkpofu osisi na ebe nsị. Ọ dị mkpa na mmiri nwere ike ịgbasa kpamkpam n'enweghị ihe ọ bụla.
Nkịtị ikpeazụ nke kwesịrị ijupụta bụ ala na-adịghị ọcha, ọ ga-ejupụta ruo mgbe ala dị ala. A na-eke akụkụ a nke usoro drainage maka ikpochapu na nhichapụ nke mmiri mmiri na mmiri ozuzo.
Nzọụkwụ ikpeazụ bụ ịwụnye ọkpọkọ drain na oké ifufe na saịtị ahụ. Olu ha ezughị oke - ọ bụ n'ihi nke a ka a haziri ide mmiri miri emi, ma ha ga-aba uru na ikpe ahụ mgbe mmiri ga-adị oke njọ, mmiri nsị nke ebe ndị dịpụrụ adịpụ agaghị enwekwa ike ịnagide ya. N'ihi ya, nchịkọta mmiri ga-edozi nsogbu nke mmiri ozuzo na mmiri mmiri na-asọpụ; ọzọ, ọ ga-arụ ọrụ nke ọma, dị ala na ngwa ngwa.
N'ọnọdụ ụfọdụ, drainage elu adịghị edozi nsogbu ahụ, n'ihi nnukwu olu na idi nso nke mmiri mmiri. Mgbe ahụ, ọ bụ ihe amamihe dị na ya ịmepụta drainage nke ógbè dịpụrụ adịpụ nke ụdị mechiri emechi ahụ. Mmiri dị omimi dị iche iche dị iche iche site n'ikike iji dozie nsogbu nke oke mmiri, ma na-ejigide ọdịdị nke ụlọ okpomọkụ.
Mmalite nke okike nke ụdị usoro drainage na-amalite site na nkwadebe nke atụmatụ na nkocha zuru ezu nke eriri na ebe a ga-etinye ọkpọkọ. Ntughari mmiri - na ntụgharị nke mkpọda. Ọzọ ị ga - achọpụta ihe omuma ha. Ya mere, n'ime oke ala ala omimi ga-abụ ihe karịrị 50 cm, na ala ájá - rue mita 1.
Tụlee ọnọdụ ihu igwe - ọ dị ezigbo mkpa na n'oge oyi oyi, ọkpọkọ na mmiri nke dị na ha anaghị agbawa, ala ahụ na-ekpo ọkụ anaghị akụda ha.
Ndi oru ugbo na ndi okachamara choputara ihe eji emepu uzo di iche iche dika uzo mmiri. Ha dị ọnụ ala karịa, ọnụ na-adịgide adịgide. N'ọnọdụ ụfọdụ, maka mgbakwunye ọzọ, a na-ekpuchi pipụ na textiles, nke na-egbochi ájá ka ọ banye n'ime ma mee ka ndụ nke usoro dum dịwanye elu.
A na-eji nlezianya na-elekọta ụzọ nke mmiri mmiri na ebe ha nabatara. N'ihe banyere usoro omimi omimi, ọ bụ ihe amamihe dị na ya igwu olulu na obosara nke ihe kariri 50 cm, ma ghara ekpuchi isi n'akụkụ. A na-ahazi drainage nke mmiri ma n'olulu mmiri, nakwa maka ókèala nke saịtị ahụ. Dị ka a na-emeghe usoro, ọ bụ ihe amamihe dị na ya iji mechie mgbidi nke olulu ahụ, si otú ahụ na-emepụta tank mmiri tankị, nke ga-aba uru na oge okpomọkụ ọ bụla.
Mgbe ha kwadebere ọwa mmiri niile ma na-emepụta usoro mmiri drainage, ha kwesịrị ịdị njikere maka ịtọ ọkpọ. Nke mbụ, ịkwesịrị ịmepụta ngwongwo na-agagharị, itinye ájá na ajịrịja na ala (10 cm ọ bụla). Naanị mgbe nke a gasịrị ịtọ ụda na ijikọta ha na otu usoro site na akwa akwa, nhọrọ nke dị iche iche.
Ebe dị anya n'akụkụ akụkụ nke drainage ahụ jupụtara na ájá na ájá. N'elu ihe mkpofu a na-etinye na ya, a ga-etinye akwa ákwà ndị na-egbochi ikuku na-esi na ájá, ájá na ala. Njedebe nke usoro - ájá drainage (15 cm), gravel (15 cm) na ala. A ghaghị ime akwa ahụ, ebe ọ bụ na oge na-aga, ala ahụ ga-edozi ma jupụta ala ndị ọzọ. Ụdị ụdị mmiri a ihe dị oke ọnụ na mgbagwoju anya Otú ọ dị ọ dị iche ogologo oge na nnukwu arụmọrụ ha nhata nke enwereghi.
Dị ka ọ na-esi doo anya site n'elu, a pụrụ imegharị drainage na dacha n'ọtụtụ ụzọ, ebe ọ bụ na ịnọgide na-arụ ọrụ dị irè, Otú ọ dị, ọtụtụ ndị, n'ezie, n'ihi ụfọdụ ihe choro igbapu ala ngwa ngwa, di oke ala na ihe kwesiri ntukwasi obi. Ọ bụ kpọmkwem ihe ndị a chọrọ ka drainage metụta na dacha, ụzọ kachasị mfe anyị nwere ike isi nye.
Ị ma? N'ọtụtụ ọnọdụ, arụmọrụ mmiri na-adabere n'ikike nke mmiri ahụ iji gbanye mmiri na mmiri. Ala na-abaghị uru agaghị ejigide mmiri, ma osisi ahụ agaghị enwe oge iji nye ya nri, nnukwu mmiri ga-ejidekwa mmiri. Ịchọpụta oke porosity nke ụwa na mpaghara ụfọdụ dị nnọọ mfe - ịkwesịrị ijupụta mmiri dị njikere na mmiri site n'ihe dị ka ọkara. Ọ bụrụ na mmiri ahụ na-erughị awa 24, ala dị oke egwu. Ọbụna ụbọchị abụọ ma ọ bụ atọ mgbe mmiri ahụ gasịchara kpamkpam n'ime ala, ala dị oke oke na olulu adịghị arụ ọrụ.
Ihe njedebe nke mmepụta mmiri na-adabere n'iji mmezu nke mmezu na ndụmọdụ niile. Ya mere, iji aka aka gị rụọ mmiri, i kwesịrị:
Nke mbụ mee atụmatụ zuru ezu nke ụlọ okpukpu nke onwe gị, ekwuputa uzo ozo a choro na mmiri, olulu ma obu olulu. Ebe olulu mmiri na-enweta ya ga-abụ na ọ dịkarịa ala mita 1 n'ịdị elu ma nweekwa akụkụ ma ọ dịkarịa ala otu mita;
N'asoro atụmatụ a, igwu olulu jiri nke nta nke nta mụbawanye omimi ha. Ogologo okporo mmiri kwesịrị ịdịkarịa ala 30 cm;
A na-eji ihe nkiri plastik kwadebere (nwere ike iji mee ihe) ịkpụ n'ime ogologo nke obosara, dị ka hà nhata nke nge (80 cm). Akara ndị ahụ na-ekpuchi gwuru olulu mmiri, gụnyere akụkụ elu ha. A kwadoro ntanetị nke ihe nkiri ahụ n'elu mgbidi ka ọ bụrụ ihe nkedo osisi (kwesịrị inwe ihe dịka 1 cm ogologo karịa obosara nke uzo), nke a na-arụ n'ebe di anya nke ihe dị ka 30-40 cm site na ibe ya. Ọ ka mma ịkpụ brik batara, nkume a gwakọtara etipịa, mkpofu osisi na isi ihe nkiri ahụ. Iji hụ na edozi ihe nkiri ahụ na olulu n'okpuru ọnọdụ ọ bụla, ihe nkedo a na-agbakọta n'etiti ọdụdọ kwesịrị ịbụ ihe nkedo dịka 5 cm dị elu karịa n'akụkụ nke usoro drainage.
Ihe na-esonụ obere osisi nke plastic film (ihe dị ka 10-20 cm karịa obosara nke ihe nkiri ahụ e tinyere na mbụ). Akara ndị a kwesịrị ikpuchi ugwu ndị a kpụrụ, na-emepụta obere oghere. N'okpuru okporo ụzọ ndị a ka a ga-ahazi mmiri na-enye n'efu.
Mmiri mmiri na-esi na ya pụta jupụtara na ala ma ọ bụ ájá, mgbe nke a gasịrị ya.
Ọ dị mkpa!После того, как дренаж своими руками будет закончен, по нему можно свободно ходить. Otú ọ dị, ọ dịghị ihe a ga-akụ n'ala a, ọbụna elu, ebe ọ ga-apụ apụ kpamkpam n'ihi akwa iru mmiri.
Gwa ha nhọrọ iji mepụta drainage n'ime ụlọ okpomọkụ ha, n'agbanyeghị na ọ dị mfe, ọ bụghị naanị ọ bụ nnukwu arụmọrụ na nhụhụhụhụhụhụhụhụhụhụhụhụhụhụhụ ya, ma ọ dịkwa onye ọ bụla nwe nsogbu ụlọ okpomọkụ.
N'ihi ihe dị iche iche, mmụba na-arịwanye elu na mpaghara ebe ndị dịpụrụ adịpụ bụ ihe a na-ahụkarị, ma, n'agbanyeghị ụdị ọnọdụ a yiri ka ọ bụ nsogbu, ị ghaghị inwe obi nkoropụ, n'ihi na a na - eji aka gị edozi drainage nke dacha, mgbe m na-amụbu ụzọ ma tinye usoro ndị a maka ịmepụta ebe mara mma a kọwara na isiokwu ahụ.
Ezigbo ubi na saịtị na windowsill ma ọ bụ kụrụ stonecrop
Otu esi elekọta ma gbasaa mgbịrịgba na-ama jijiji
Copyright 2019 \_ Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa \_ Ịgbagharị nke saịtị ahụ na aka ya, otu esi agbapu ụlọ ahụ site na mmiri